Dhaqamadaan guurka yaab inta dhaafeen ayaad la argagaxi doontaa qaarkoodna qosolka ayay kaa dhameyn doonaan. Qeybtii 3aad. Somalia ayaa qeyb ka ah. | Filimside
Dhaqamadaan guurka yaab inta dhaafeen ayaad la argagaxi doontaa qaarkoodna qosolka ayay kaa dhameyn doonaan. Qeybtii 3aad. Somalia ayaa qeyb ka ah.
Filimside waxay markasta u taagantahay in akhristayaasheeda dhacdo kasta ka haqab tirto sidaas owgeed waxaan halkaan kusoo gudbin doonaa qeybtii 3aad qaar kamid ah dhaqamada ugu yaabka badan ee dadyowga aduunka guudkiisa saaran sameeyaan.
13-Mid kamid ah qabiilooyinka shiinaha daga waxaa dhaqan iyo caado u ah in gabadha geed fuusho.
Kadibna waxaa isku imaanayo qoysaska doonayo gabadhaas in wiilkooda ku daraan iyagoo ulo wato.
Kadib wiilasha guurka rabo waxay ku tartamayaan cidii geedka fuuli laheyd oo gabadha gacanteeda qabsan laheyd.
Qoysaskana waxay ku dadaalayaan in wiilkooda gacan ku siiyaan fuulista geedka sidoo kalana waxay wiilasha kale u diidayaan in geedka fuulaan.
Tartanka qofkii ku guuleysta oo gabadha gacanteeda qabsada ayaa gabadhaas guursanaya.
14-dadyowga Irishka ah uma ogola gabadha aroosada ah in cagaheeda dhulka ka qaado iyagoona aaminsan hadey sidaas sameyso in jiniyada dafayaan aroosada.
Sababta ay sidaas u qabaan ayaana waxay tahay in ay aaminsanyihiin in gabadha aroosada tahay shakhsiga waqtigaas aduunka ugu quruxda iyo bilicda wanaagsan sidaas owgeed looma ogola in cagaheeda dhulka ka qaado si jinniga u dafin.
15-Mid kamid ah qabiilooyinka afrika dagan waxaa dhaqan u ah in xiliga arooska gabadha carabka laga duleeliyo kadibna xarig looga xiro.
Xarigaas waxaa loo dhiibayaa wiilka arooska kadibna wuxuu dhageysanayaa sheekada gabadha.
Hadii uu u bogi waayo xariga ayuu jiidayaa si uu u aamusiyo.
16-Mid kamid ah jaziiradaha aasiya ku yaalo dadka ku nool waxaa dhaqan iyo caado u ah in wiilasha jaziirada saf galaan kadibna caloosha u jiifsadaan gabadhana wado u noqdaan.
Kadib gabadha ayaa dhabarkooda ku soconeyso ilaa ay ka tageyso goobta xaflada.
17-Wadanka Burma waxaa caado u ah in gabadha aroosada ah dhagaha laga tolo iyadana mudadaas xanuun dartiis qeylo yeerto balse cid maqleyso ma jirto waxaana u sabab ah codka muusikada oo cirka lagu shareeraayo.
18-Soomaalidii hore waxaa dhaqan iyo caado u ahaan jirtay in arooska uu aroosada six un u garaaco asigoona feer iyo jilib kala daalayo si uu u muujiyo inuu yahay masuulka guriga looga dambeeyo.
Previous articleDhaqamadaan guurka yaab inta dhaafeen ayaad la argagaxi doontaa qaarkoodna qosolka ayay kaa dhameyn doonaan. Qeybtii 2aad.
Next articleRasmi: waxaa la si rasmi ah loo shaaciyay waqtiga la daawan doono filimka ay ku midoobayn Priyanka Chopra iyo Fahan Akhtar ee The Sky is Pink